नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : रबीन्द्र मिश्रको आक्रोस : कम्युनिस्टको नाममा कलंक
रबीन्द्र मिश्रको आक्रोस : कम्युनिस्टको नाममा कलंक
नेता र नेता पत्नी विमारी भए दिल्ली र सिँगापुरमा उपचार। अनि न्यायको भिख माग्ने गंगामाया अनि तराई/पहाड/हिमालका विपन्न जनताको स्वास्थसेवाका लागि निस्वार्थ लड्ने डा गोविन्द केसीलाई चाहिँ तिमीहरू मार्न चाहान्छौं? धिक्कार छ, तिमीहरूलाई। तिमीहरू कम्युनिस्टको नाममा कलंक हौ। कहाँ छन् खुब असल भनिएका लालबाबु पण्डित, गोकर्ण विष्ट र रवीन्द्र अधिकारीहरू? के निन्द्रा त लाग्छ तपाईंहरूलाई आजभोली?